ချက်ပြုတ်နည်းများ Archives - Page2of4- ဒိုးမယ်
ဘယ်အစားအစာပဲဖြစ်ဖြစ် ဆိုင်တွေမှာ စျေးကြီးပေးပြီး ဝယ်စားမဲ့အစား အိမ်မှာပဲ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်လုပ်စားချင်တဲ့သူတွေ ရှိကြလား? အဲ့လိုဆိုရင်တော့ ဒိုးမယ်က ကိုရီးယားစတိုင် ကန်စွန်းဥထမင်းပေါင်းလုပ်နည်းလေးကို ဝေမျှပေးမယ်နော်။ ကိုရီးယားစတိုင် ကန်စွန်းဥထမင်းပေါင်းလုပ်နည်း ကိုရီးယားကားတွေမှာ...
ဒါဖတ်ပြီးမှ မီးဖိုချောင်ထဲ ဝင်ပါ! ကဲ အခုမှ မီးဖိုချောင်ထဲ စဝင်မဲ့ အိမ်ရှင်မတွေရော အိမ်ရှင်ထီးတွေရောအတွက် သိထားသင့်တဲ့ အခြေခံအချက်လေးတွေပေါ့။ မီးဖိုချောင်ထဲရောက်မှ ခေါင်းကုတ်နေရမဲ့အဖြစ်မျိုး မဖြစ်ရလေအောင် ဖတ်ထားလိုက်တော့နော်။...
ဒိုးမယ်ကိုအားပေးနေတဲ့ အကိုအမတွေကို ဒေပဝါလီ နေ့မှာ သူငယ်ချင်းတွေစုပြီး မုန့်လုပ်စားနည်းလေးကိုပြောပေးပါမယ်နော်။ ၁. ဂျုံဌက်ပျောကြော် ဂျုံမုန့် 200 gm ကို မိမိလိုသလောက်ပျစ်ပျစ်လေးဖျော်ပါ ။ ဌက်ပျောသီးကို...
ကြက်သားကို ဘယ်လိုများ ထူးထူးခြားခြားကင်လည်း တွေးနေကြပြီလား။ အမှန်တော့ စာရေးသူလည်းတော်တေ်ာလေး အံ့ဩခဲ့ရတာပါ။ အမှန်တကယ်ကို ထူးခြားပါတယ်။ကင်နည်းကတော့ နှစ်မျိူးပါ။ ထိုင်းလူမျိူးတွေကင်တဲ့နည်းနဲ့ ဗီယက်နမ်လူမျိူးတွေကင်တဲ့နည်းပါ။ ထိုင်းတွေကင်တဲ့နည်းလေးကို စာရေးသူခေါ်တာကတော့ ကြက်သားသံပုံး...
ပါဝင်ပစ္စည်းများ ဖား 10 ကောင်ခန့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆီ ၅ဇွန်းခန့် ကြက်သွန်ဖြူ ၃မွှာ ဗုံလုံသီး ၂လုံး ပဲလိပ်ပြာအနည်းငယ် ရှောက်ရွက် အနည်းငယ် ငရုတ်သီးငါးတောင့်ခန့် ချေထားပါ...
စက္အသံုးမျပဳပဲ ေရခဲမုန္႔ကို အိမ္မွာဘယ္လို လုပ္ၾကမလဲ
ကဲ ဒီတစ္ခါေတာ့ ေရခဲမုန္႔ခ်စ္သူေတြအတြက္ ပါဝင္ပစၥည္းငါးမ်ိဳးေလာက္နဲ႕ လြယ္လြယ္ကူကူ အိမ္မွာ လုပ္ႏုိင္တဲ့ ေရခဲမုန္႔ေလးအေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။ ႏွစ္ေယာက္စာ ဗင္နီလာေရခဲမုန္႔ေလးကို အိမ္မွာ လုပ္တဲ့ေနရာမွာ ပါဝင္ရမဲ့ အမယ္ေတြကေတာ့…….....
အိမ္မွာ လြယ္လြယ္ကူကူ ဒုိးနပ္လုပ္စားၾကမယ္
ဒိုးနပ္ဆိုတာေတြက ေကာင္းကင္ဘုံက လာတဲ့နတ္သုဒၶါ တစ္မ်ိဴးလုိ႕ေတာင္ တင္စားေခၚေ၀ၚၾကပါတယ္။ဒုိးနပ္ေတြက အိမ္မွာ အလြယ္တကူ လုပ္စားလုိ႕ရပါတယ္။ ဒိုးနပ္ေတြက မုန္႕ဖုတ္အာဗင္ မပါပဲနဲ႔ အိမ္မွာ ဒယ္အုိးတစ္လုံးနဲ႔ပဲ အလြယ္တကူ ေၾကာ္လုိ႕ရပါတယ္။...
ကော်ဖီမဟုတ်တဲ့ ကော်ဖီဆိုတော့ အံသြသွားလား ? အိမ်မှာနေရင်း အသစ်အဆန်းလေးတွေ လုပ်စားကြည့်ချင်သူတွေ ဒိုးမယ် ပရိသတ်ကြီးထဲမှာ ပါမယ် ထင်တယ်လေနော် ကဲ ဒီတော့ သူတို့ အတွက်...